Ukuhlanjululwa kweNqabileyo yeHlabathi eyomileyo iqhuma kwiBhalon
Uvame ukuvuthela ibhaluni nge-air okanye i- helium , kodwa ngaba uyazi ukuba unako ukufumana ibhaluni ukuba uzinyathele ngokwawo usebenzisa ice elomileyo? Nantsi indlela owenza ngayo le projekthi yesayensi elula:
Izinto eziManzi zeBlue Balloon
I-dry ice pellets
Kulula ukusebenzisana ne-funnel ngoba ithatha intamo ibhaluni evulekile. Ukuba usebenza kunye namaqabunga omileyo owomileyo, unokufumana kulula ukuwaphula okanye ukuwachitha ukuze uwathulule kwibhaluni.
Nangona kunjalo, ukuba unxibe iiglavu, kulula kakhulu ukwenza le projekthi ngezandla zakho kunye nebhaluni. Ukuba unomlilo wokucima umlilo we-carbon dioxide, unokwenza i-ice eyomileyo ngokwakho .
Gcina uvule umlomo ibhaluni.
Indawo okanye uthele iqhwa elomileyo kwibhaluni.
Ukubopha ibhaluni ukwenzela ukuba igesi ayiyi kuphuma.
Ibhaluni iya kubetha njengoko ubukela. Uza kubona i-frozen amanzi ngaphandle kwebhole apho iqhwa elomileyo lipholisa umoya ngaphaya komphezulu we-latex. Ingakanani ibhaluni echaphazelekayo incike ekubeni unomileyo owomileyo owawongeza. Inani elincinane leqhwa elomileyo liza kufaka ibhaluni ngokukhawuleza, ngelixa inani elikhulu liza kuyenza ip.
Iqhwa elomeleleyo yindlela eqinile ye-carbon dioxide. Kwiimeko eziqhelekileyo zengcinezelo yomhlaba, iqhwa elomileyo lincincila kwi-gesi ngqo. Njengoko igesi ivuselela, iyanda. I-Carbon dioxide inamandla kakhulu kunomoya, ngoko ke xa ushiya ibhaluni elomileyo icele, liya kuphantsi kunokuba ifakwe njengebholuni ye-helium.
Iqhwa elomileyo iqanda ngokwaneleyo ukuba inokukunika isithwathwa emva kokutshatyalaliswa okufutshane. Kulungele ukugqoka iiglavu kule projekthi kwaye uvumele ibhaluni ibhale kwi-countertop kwaye ingekho esandleni sakho. Kwakhona, ungadli iqhwa elomileyo. Yigcine kude nabantwana kunye nezilwanyana.
I-Reflective Pronouns ngeSpanish
Zonke iiTyara okanye zeSiqithi?
Isikhokelo sokuFunda ngokujulile